July | 2009 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း စီရင်ချက်ချမည့် သတင်းကြောင့် ထောင်ရှေ့သို့ ရောက်လာသော ဦးဝင်းတင် နှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတချို့ကို ယနေ့ နံနက်က တွေ့ရပုံ။ လုံထိန်းများကလည်း ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက နှိမ်နင်းရန် အသင့်ပြင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ (ဓာတ်ပုံများ – AP & Reuters )
Posted by oothandar on July 31, 2009 in News in Photos
Chit Thu Wai in maxi dress
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် မိုဒယ်
ကြော်ငြာတခုတွင် ကိုယ်ဝန်သည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသော မိုဒယ် ချစ်သုဝေ။
လာမည့် ၁၀ ရက်နေ့သည် ချစ်သုဝေ၏ ၂၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဖြစ်သည်။ ချစ်သုဝေသည် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်လေးတွင် နေထိုင်သည့် ဆရာဝန်၊ မော်ဒယ်၊ အဆိုတော်တဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် အစ်မဖြစ်သူ ချစ်ဆုဝေ နှင့် တွဲဖက်ပြီး သီဆိုထားသည့် “သို့ ဖေဖေ နဲ့ မေမေ” အမည်ရှိ သီချင်းခွေ ထွက်လာသည်။ ၂၀၀၂ မှ ၂၀၀၆ အတွင်း သီချင်းခွေ ၆ ခွေ ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု People မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Before July 31, Numerous Burmese Activists detained by Burmese secret police
ဇူလိုင် ၃၁ – တရားရုံးချိန်းမတိုင်မီ အဖမ်းခံရသူ ၂၃ ဦး စာရင်းရသည့်အနက်မှ ၂ ဦး ပြန်လွတ်လာဟု ဆို
ပြည်တွင်းက ပေးပို့သော သတင်းအရ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ရပ်တည်လှုပ်ရှားသူများ ယမန်နေ့ညက အများအပြား မြန်မာပြည်အနှံ့တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသည်ဟု သိရသည်။ ယမန်နေ့ညက ဖမ်းဆီးထားရာမှ ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်သူ ၂ဦးမှာ – မြောက်ဥက္ကလာ မှ ဒေါ်နော်အုန်းလှ နှင့် စမ်းချောင်း မှ ဦးညွှန့်လှိုင် (အောင်လံအမတ်) ဟု ဆိုသည်။ ဆက်လက်ရရှိသော အဖမ်းအဆီးစာရင်းများကို တင်ပြပေးသွားမည်ဟု သတင်းပေးပို့သူက အကြောင်းကြားထားသည်။ ယခုလတ်တလော စာရင်းလက်ခံရသည့် စစ်အုပ်စု၏ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသူ ၂၁ ဦးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Posted by oothandar on July 31, 2009 in Local News Headlines
Than Soe Hlaing – July 31st or …
ဇူလိုင် ၃၁ သို့မဟုတ် …
နံနက် ၈နာရီ ခွဲ ရန်ကုန်၏ နံနက်ခင်းမှာ ပုံမှန်နေ့ တနေ့ဟု ထင်ရသော်လည်း အချို့သူများကတော့ ယနေ့ကို တစုံတရာ ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့် နေ့တနေ့ အဖြစ်ထင်မှတ် လျက်ရှိသည်။ မနေ့ညနေမှ စပြီး သည်းသည်းမဲမဲ ရွာသည့်
ရန်ကုန်မိုးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမိန့်ချမှတ်မည့် နံနက်တွင် တိတ်ဆိတ်နေပြီး အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနှင့် တချက်တချက် နေရောင်ပင် မြင်နေရသည်။ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသည့် လူအများ၏ စိတ်ထဲတွင် ဒီနေ့တော့ ဒေါ်စုကို အမိန့်ချလိမ့်မယ်၊ ဘာများဖြစ်ဦးမလဲ စသည့်အတွေးများလည်း တွေးမိနေကြသည်။
လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်တော့ ယူနီးဖောင်း တောက်ပြောင်လျက်ရှိသည့် လုံထိန်းရဲ ၃ယောက်မှာ လက်ဖက်ရည်သောက် နံနက်စာစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်နေကြသည်။ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဆုံတွင်တော့ အစိမ်းပုပ်ပုပ် ယူနီဖောင်းဝတ် စစ်သားနှစ်ယောက်က သေနတ်ကို လွယ်လျက်အနေအထားဖြင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ စခန်းဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်နေကြသည်။ သူတို့သည် မီးရထားရုံးချုပ်ထဲတွင် စခန်းချနေကြသည့် စစ်တပ်များထဲမှ ဖြစ်ဟန်ရှိပြီး ဇူလိုင် ၃၁ ရက်၊ ယနေ့တွင် တစုံတရာ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အတွက် အင်အားပြနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on July 31, 2009 in News Features
Trial on DASSK postponed again to 11th August
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားရုံးချိန်း သြဂုတ်လ ၁၁ သို့ ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း
တရားရုံးက ၀န်ထမ်းတဦး၏ အဆိုအရ ဒေါ်စုရုံးချိန်းကို သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် တရားရုံးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ရသူ မဟုတ်သဖြင့် တရားရုံး၏ အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်ကို မပြောနိုင်ပေ။ အင်းစိန်ထောင်တရားရုံး ပြင်ပတွင် လုံခြုံရေးထူထပ်စွာ ချထားပြီး အတိုက်အခံများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူ လူထုတို့ကလည်း ရောက်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
SPDC loves to point the finger
ရေကြည်နောက်သတဲ့ … မေစုရေ
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂ဝဝ၉
ဝံပုလွေက အပြစ်မဲ့သူ သိုးငယ်ကို ရေကြည်နှောက်သည်ဟု အပြစ်ရှာသည်။ သိုး ငယ် ကပြန်၍ ပြောသည်။ ‘ရေကြည်နှောက်ဖို့ နေနေသာသာ- ရေထဲသို့ပင် မဆင်းရသေး’ ဝံပုလွေကအပြစ် ရှာကြံ ညစ်တွန်း တွန်းပြီးသားပေမို့ ‘မင်းမနှောက်လည်း မင်းအမေက နှောက်မှပဲ’ ဟု မရှိသောအပြစ် အတည်သဘော ဖြစ်အောင် ရှာကြံလီဆယ်သည်။ ဝံပုလွေ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်စရိုက် (psycho-logical propensity) မှ ပြဌာန်းချက် အရ သိုးငယ်မှာ အပြစ်ရှိလေပြီ။ မောဟအမှောင်ကို အားကိုးလို့ ဥပဒေပြု စီရင်သည်ကား ‘ လှုပ်လှုပ် – မလှုပ်လှုပ် မင်းမှာ အပြစ် ရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သက်စွန့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ကိုမှ မထောက်၊ ဝံပုလွေတို့ အခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရမ်းကားရိုင်းစိုင်း ထင် တိုင်းကြဲ နေရတာလို့ သူတို့ နားမလည်ပါ။ မောဟ၏ အမှန်ကို မမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဉာဏ်အမြော်အမြင် ကွယ်ပျောက်ရသည်။ ဒေါသ၏ လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် အကျိုးအမြတ်မဲ့ ကုန်ဆုံးရသည်။ ဘယာ၏ ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင့် အခါခါ သေရသည်။ ဆန္ဒ၏ တောင့်တ မဆုံးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြည်ဆည်ရာ ရှာမရ ဖြစ်ရသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on July 31, 2009 in Op-Ed
It must be “Fightday”.
(July 30th 2009)
It must be” Fightday”.
Posted by oothandar on July 31, 2009 in Aung Way, poem